ClouDNS dia mpitarika ao amin'ity orinasa ity, manome DNS Hosting haingana sy azo antoka. Manolotra serivisy DNS iray taonina izy ireo izay manomboka amin'ny kaonty fampiantranoana DNS maimaim-poana hatrany amin'ny alàlan'ny lohamilina DNS tsy miankina ho an'ny orinasanao:
Reverse DNS - Serivisy Reverse DNS nomen'ny ClouDNS dia serivisy Premium DNS ho an'ny tompona tamba-jotra IP sy mpandraharaha ary tsy tafiditra ao amin'ny drafitra Maimaimpoana. Ny fampiantranoana Reverse DNS dia serivisy kilasy fandraharahana ary manohana ny faritra IPv4 sy IPv6 Reverse DNS.
Enterprise DNS - ClouDNS 'Enterprise DNS network dia natao hanodinana fanontaniana an-tapitrisany isan-tsegondra. Ny maodelin'ny vidin'izy ireo dia tsy mifototra amin'ny faktiora fangatahana. Tsy homena vola ianao noho ny tampon'ny tamponao ary tsy hijanona tsy hiasa mihitsy ny anaranao, noho ny fetran'ny fangatahana DNS. Tsy homena faktiora amin'ny karazana tondra-drano fangatahana DNS ianao.
ClouDNS dia mpamatsy DNS Managed hatramin'ny 2010. Ny tanjon'izy ireo dia ny hanome ny serivisy DNS tsara indrindra eto an-tany. Manatsara sy manitatra ny tamba-jotra hatrany izy ireo mba hihoatra ny fenitry ny indostria ary hitondra ny mpanjifa ROI avo indrindra. Ny fotodrafitrasan'izy ireo any Anycast DNS dia misy ivon-toerana 29 isan-karazany any amin'ny firenena 19 any amin'ny kaontinanta 6.